Ma lagu guuleysan karaa dhismaha ciidammada qaranka Soomaaaliya? | Newsomali
Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay kullan ku saabsan arrimaha amniga Soomaaliya kaas oo ay ka qeybgalayaan madaxda Soomaaliya iyo wufuud caalami ah.
Dhismaha ciidamada qaran
Shirka Muqdisho waxaa ka qeybgalaya wufuud kala duwan, waxaana looga hadlayaa dhismaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya
Sida ku cad warar hordhac ah oo ka soo baxaya shirka amniga ee ka furmay Muqdisho waxaa inta badan laga wada hadli doonaa hormarka dhanka amniga ee la sameeyay ka dib shirkii London ee bishii May ee sanadkan.
Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay furitaanka shirka maanta ka furmay Muqdisho wuxuu sheegay “Waxaan wax badan ka baranay baahida iyo awoodda ay leeyihiin ciidankeena. Macluumaadkan waxaan u adeegsan doonaa in aan ku salaynayo isbedelka aan sameynayno. Guulahan aan gaarneyn waxay fududeyn doonaan meelmarinta qaab dhismeedka ammaanka qaran, iyo qaabka wax ku oolka ah ee loo wajahayo ammaanka.”
”Heshiiska dhinaca ammaanka ee aan halkan ku soo bandhigayno waxaa lagu salayn doonaa heshiiskii taarikhiga ahaa ee ay dhowaan gaareen dowlada Federaalka iyo maamulada ka jira dalka oo ka heshiisyey tirada ciidanka, halka ay ka hawlgeli doonaan, maalgelintooda iyo cidda hagaysa” ayay tiri, ra’iisal wasaaraha Britain oo ka hadashay shirkii bishii May ka dhacay London ee looga hadlay arrimaha Soomaaliya.
Ciidamada xoogga dalka ee hadda dhisan waxay qeyb ka yihiin dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee AMISOM ay qeybta ka tahay.
Ciidamada nabad ilaalinta ee Midowga Afrika eek u sugan Soomaaliya ayaa gaarayo illaa 22 kun oo askeri oo ka kala socda dalalka Ugandha, Burundi, Kenya, Jabuuti iyo Itoobiya.
Hase yeeshee waxa ay u egtahay in dowladda federaalka aysan walwal badan ka qabin bixitaanka AMISOM ee biloowday sida uu sheegayo wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan oo BBC-da u warramay
Madaxweyne Farmaajo oo dhiira gelinayay ciidamada xoogga dalka ayaa sheegay “waxaan aaminsanahay in aan ka guuleysaneyno Al-Shabaab. Khibradeeda waad leedihiin, Wadaniyaddeeda waad leedihiin… dowlad wanaagsan oo diyaar u ah in ay hormuud idiin noqotana waad haysataan”.
Madaxweyne Farmaajo wuxuu sheegay: “Muddadan kooban waxaan ku dhamaystirnay qiimeynta iyo diyaargarowga howlgalka ee booliska iyo milaterigeena. Waxaan bilownay in aan qaab casri ah u diiwaan gelinayo askarteena si musharakooda loogu shubo akoono bangiga ah.”
Ergeyga gaarka ah ee xoghayaha Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya, Michael Keating oo ka hadlay kullanka wuxuu yiri: “Waxay ila tahay in awoodda beesha caalamka ay ku dhisayso laamaha ammaanka ee Soomaaliya ay ku xirnaan doonto hormarka laga sameeyay qaabka ammaanka iyo meelmarinta qorshahaasi kala guurka ah. Soomaalidu waxay mudan yihiin taageero macquul ah oo beesha caalamka uga timaada si ay taasi u sameeyaan.”
“Ka dowlad ahaan, waxaan xoogga saarnay dhakhliga gudaha waxaana filaynaa in mustaqbalka aan la wareegi doona kharashaadka ku baxa dowladdeena. Haseyeeshee xaaladda ammaan ee hadda jirta ayaa dhaafsiisan awoodeenna dhaqaale, waxaana degdeg u codsaneynaa in beesha caalamka ay kordhiso taageeridda laamaheenna ammaanka, waa haddii la rabo inaan ilaalino guulaha aan ilaa hadda gaarnay.” Ayuu yiri madaxweyne Farmaajo.